Tantaran’ilay Zanaka Lahin’ny Mpampijaly Olona Tao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2016 13:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Ελληνικά, Français, English
Luis Quijano. Sary: Nicolás Bravo. Nahazoana alalana.
Ity dika nasiam-panovana tamin'ny antsafa niarahana tamin'i Luis Quijano, notontosain'i Alejo Gómez ity dia nivoaka voalohany tamin'ny 23 Aogositra 2016 tao amin'ny Día a Día. Nadika tamin'ny teny Anglisy sy navoaka teto indray izany rehefa nahazoana alalana.
Tamin'izy 15 taona, noteren'ny rain'i Luis Alberto Quijano hanatri-maso ny horohoro ao La Perla, foibem-pamonjàna miafina ao an-tanànan'i Córdoba, Arzantina i Luis. Olon-dehibe izy ankehitriny, ary nijoro vavolombelona nanohitra ny rainy tamin'ny raharaham-pitsarana La Perla-Ribera ao amin'ny faritanin'i Córdoba noho ny heloka bevava nataon-drainy nandritra ny fitondrana jadona. Mpampijaly telo amby efa-polo no voampanga tamin'ny heloka bevava tamin'ny olombelona tamin'ity raharaham-pitsarana ity, izay nifarana tamin'ny 24 Aogositra 2016.
Tsy nisafidy ny fiainany i Luis Alberto. Niaritra ny mafy izy: ao ny enta-mavesatra amin'ny fitondrana anarana mitovy amin-drainy ary koa izy nanatri-maso ny hetsika ara-miaramila feno herisetra tao La Perla fony izy 15 taona. Nitàna ny tsiambaratelom-pianakaviana nandritra ny 34 taona izy.
Tamin'izany fotoana izany, nihevitra aho fa tsy nisy ny olana. Nahatsiaro toy ny mpitsikilo aho. Saingy eo amin'ny faha-15 taona, tsy mahafantatra ny ankizy fa ataon'ny rainy fitaovana. Tsy mbola vonona hiaiky aho fa mpangalatra, mpampijaly sy mpamono olona ny raiko.
Tsy nanan-tsafidy i Luis: Zandary manampahefana ny rainy, Luis Alberto Quijano, komandà faharoa tao amin'ny sampam-pitsikilovana 141 tao La Perla nanomboka ny taona 1976 ka hatramin'ny 1978, nandritra ny didy jadona Arzantina, fotoanan'ny fampihorohorom-panjakana tao Arzantina nanomboka teo amin'ny 1974 ka hatramin'ny 1983.
Luis Alberto Quijano. Sary tahiry.
Ity lahatsoratra ity dia tsy tantaran'i Luis Alberto Quijano ilay mpampijaly, voampanga tamin'ny fakàna an-keriny olona miisa 158, fampijaliana ary vono olona efa ho 100 sy fakàna an-keriny ankizy 10 taona. Fa tantaran'ny zanany lahy, lehilahy nahafantatra ny horohoro niainany nandritra ny taona maro fony izy mbola tovolahy, ary nony farany, nijoro nanohitra ny rainy teo anatrehan'ny fitsarana federaly.
Tantara mampiseho ny fahefana goavana ananan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka izy ity, sy ny fomba nisafidianan'izany ankizy izany ny lalam-pamonjena.
Tao amin'ny trano fanaovana fanatanjahan-tena nankany avy eo sampam-pitsikilovana
Raha nanomboka nitondra ahy tany amin'ny sampam-pitsikilovana ny raiko, nankany amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena teo akaiky aho matetika ary lasa naman'ilay tovolahy mpanao haiady, izay antsoin'ny olona hoe “Kent”. Nilaza ny momba azy tamin'ny raiko aho ary andro vitsy taty aoriana, nampiseho sary fotsy sy mainty tamiko izy ary nangataka tamiko mba hamantatra ilay namana. Hoy izy:
Adala ianao, lasa naman'ny olona ERP! Tandremo, ho alainy an-keriny ianao atsy ho atsy ary tsy maintsy hamonjy anao aho.
ERP dia midika hoe Ejército Revolucionario del Pueblo, [Tafika Revolisioneram-bahoaka], sampana mitam-piadiana ao amin'ny antoko Revolisioneran'ny Mpiasa Komonista ao Arzantina.
Tsy navelany hiverina tany amin'ny toeram-pikotranana intsony aho, andro vitsy taty aoriana, nentiny tany amin'ny sampam-pitsikilovana aho mba hiasa. Nolazainy aho fa ho lasa mpitsikilo.15 taona aho tamin'izany; ka nihevitra fa tsy nisy ny olana satria nampianatra ahy ny raiko.
Tao amin'ny sampam-pitsikilovana, nasain'izy ireo namotika ny antontan-taratasin'ireo gadra aho. Antontan-taratasy isan-karazany: diplaoman'ny oniversite, naoty nosoratan-tanana, literatiora, sertifikà, fampielezan-kevitra, boky sy ny sisa.
Sary: Comisión Provincial de la Memoria
‘Ao no ampijalian'izy ireo ny gadra’
Nentin'ny raiko tao La Perla in'efatra aho, tamin'ny 1976. Nasainy niandry tao anaty fiara teo am-bavahady aho tamin'ny fitsidihana voalohany sy fahaefatra.
Nasainy nivoaka ny fiara aho tamin'ny fitsidihana faharoa ary nentiny tamin'ny toeram-pialofana nisy fiara, fanaka, fahitalavitra, vata fampangatsiahana, izay zavatra rehetra azonao an-tsaina. Nangalarina avokoa ny zavatra rehetra tao. Nomeny zavatra nifono bodofotsy aho ary nasainy nentina tao anaty fiara, ary raha nosokafako izany, vongam-bolafotsy goavambe no hitako tao.
Tamin'izany andro izany, nankao amin'ny toerana teo akaiky aho, izay ametrahan'izy ireo ny zavatra nangalarina ary nanomboka niresaka tamin'ny zandary niandry ny toerana aho. Nisy fotoana, nentiny tamin'ny efitra nisoka-baravarana aho ary hoy izy:
Ao no ampijalian-dry zareo ny gadra
Nijery aho ary nahita fandriana fampijalian'izy ireo olona. Tahaka ny fandrian'ny toby miaramila misy vimiaina izany. Taty aoriana, nahita aho fa apetak'izy ireo amin'ny vin'ny fandriana ny taribin'herinaratra miiba mihanjaka ary nampiasa taribin'herinaratra miabo hafa tsy mitanjaka izy ireo mba hikasihana ny vatan'ny olona mifatotra eo. Fatoran'izy ireo amin'ny vy ny tanan'ny olona eo ambonin'ilay fandriana, topazan'izy ireo rano ary doran'izy ireo amin'ny herinaratra 220 volts ny taovam-pananahan'ny gadra.
Nisy fofona tena ratsy tao… Tahaka ny salakan-jaza maloto. Taona maro taty aoriana, rehefa nigadra tamin'ny trano ambenana ny raiko, nisy fofona tahaka izany nivoaka tamin'ny efitranony. Nampifandraisako ny zava-misy ary nahita aho fa fofon'olona ao anatin'ny fahoriana mafy izany. Tsy adinoko mandrakizay izany fofona izany. Ary nanontany tena aho, nahoana no mahavita mampahory olombelona ny olona iray ?
‘Fantatro tsara fa novonoin-dry zareo ireo olona ireo’
Raha nitondra ahy fanintelony tany am-piasany ny raiko, nentiny tao amin'ny fidirana ao amin'ny La Cuadra aho (faritra misy ireo gadra tampena-maso sy voafatotra vy ny tanana). Niresaka tamin'i “Chubi” Lopez (Jose López, olon-tsotra voampanga) izy, nanararaotra izany aho ary nijery ny tao anatin'ny La Cuadra.
Tany amin'ny faran'ny toerana, nahita kidoro milahatra misy olona mitanjaka matory mihohoka amin'ny tany aho, mifatotra ny tanana aman-tongotra. Teo akaikin'ny fidirana, nisy olona hafa mipetraka am-pahanginana eo amin'ny kidoro. Nahita ny raiko fa nijery ireo gadra aho ka hoy izy: “Inona no jerenao, adala?” ary namaly aho hoe “Nahoana aho no nentinao taty?”.
Fantatro tsara fa vonoin-dry zareo ireo olona ireo. Atsipin'izy ireo any anaty lavaka ary tifirin'ny mpiasa miaramila sy alevin'izy ireo. Fantatro izany satria niresaka momba izany tany an-trano ny raiko.
Eo akaikin'ny La Cuadra, nisy efitra kely antsoin'izy ireo hoe birao. Fantatro fa nidaroka nahafaty olona tao i “Palito” Romero. (Araka ny filazan'ireo tafavoaka velona, nidaroka nahafaty ilay mpianatra Raúl Mateo Molina i Jorge Romero, olon-tsotra, anisan'ny voampanga tamin'ny raharaha La Perla-Ribera).
Amin'ny lahatsary eto ambany, mitsidika ity toeram-pampijaliana taloha ity i Emilio Fessia, talen'ny Sehatra ho Fahatsiarovana ao La Perla no sady maneho hevitra.
Ny lalana nidiranao no lalana nidiran'ireo olona nalaina an-keriny. Raha mijery ny sarintany ianao, nandray ity lalana ity ry zareo ary nentina ho amin'ny fotoana fampijaliana voalohany. […] Eto no nanovàna ny anaran'izy ireo sy anomezana nomerao azy ireo izay anisan'ny dingana hamonoana azy ireo. […] Raha tafavoaka velona amin'ny fotoana fampijaliana izy ireo, dia natsipy tao amin'ny Cuadra ireo gadra nanjavona mandra-pisian'ny baiko avy any ambony hamindra azy ireo. Lainga izany, fanalefaham-piteny nampiasan'izy ireo hitifirana sy hampanjavonana ny vatana mangatsiakan'izy ireo izany amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Nitondra ireo karazan-javatra nangalarina ny raiko. Saingy tamin'izany taona izany, tsy nahafantatra ny dikan'ny “hazan'ny ady”, araka ny fiantson'izy ireo aho. Saingy taty aoriana, rehefa miaramila aho (tao amin'ny zandary), fantatro amin'izay izany hoe hazan'ny ady fa karazana sabatra kely fotsy, na angamba takelam-panondron'ny miaramila nalainao tamin'ny fahavalo resinao.
Luis Alberto Quijano sy ny zanany lahy. Tahirin-tsary
Saingy raha miditra ao anaty trano ianao ary mangalatra vata fampangatsiahana, radio, fitafy, tabilao, vola…. Tsy hazan'ny ady intsony izany fa fandrobàna. Halatra.
Nanontany tena foana aho hoe nahoana ny raiko, manamboninahitra filohan'ny mpitandro ny filaminana no nandray anjara tamin'ny fandrobàna tahaka izany. Tsy nazava tamiko izany. Manamboninahitra tao amin'ny zandarmaria ihany koa aho ary tsy mbola niserana tao an-tsaiko ny hiditra amin'ny tranon'olona ary hangalatra.
Tsy mazava amiko nahoana ny raiko no nahavita izany. Raha nilaza tamiko izy indray andro fa mpanao heloka bevava aho, namaly azy aho hoe: Ary ianao, iza no mangalatra fiara eny an-dalana? Tsy mpanao heloka bevava ianao? Nipoaka hatezerana tafahoatra izy, nidaroka ahy ary nitabataba tamiko:
Ny andro hihoaranao io tsipika io, hitady anao aho ary hovonoiko ianao amin'izany andro izany. Tsy mila olon-kafa hanao izany !
Izany no raiko. Tsy mba manana fahatsiarovana tsara momba azy aho.
Raha nijoro vavolombelona tamin'ny raharaham-pitsarana aho, dia nampiseho sary taloha misy ahy nitafy palitao sy vozon'akanjo volon'ondry nentin'ny raiko avy any La Perla. Tsy nahantra izahay, saingy nitondra akanjo any an-trano izy na dia izany aza. Tamin'izany fotoana izany, niampanga ahy ho nandray anjara tamin'izany heloka bevava izany ny fiarovana, ary nilaza aho fa tsy misy olana, afaka miampanga ahy amin'izay tiany izy ireo.
Na izany aza, tao aho mba hijoro vavolombelona.
‘Ny fanjavonan'ny nofo mangatsiaka no asa farany tena maharikoriko indrindra’
Satria efa lehibe aho ankehitriny, kaikerin'ny nenina aho. Manan-janaka aho; rehefa manan-janaka ianao, fantatrao ny lanjan'ny fiainana. Mivoatra ianao ary mahita fa ratsy ny mamono olona. Lasa lavitra aza aho raha miteny hoe:
Eny, hevero hoe namono olona ianao nandritra ny didy jadona”, fa nahoana no mampanjavona vatan'olombelona? Nahoana no mangala-jaza?
Indray andro, nitondra zazavavy tany an-trano ny raiko izay novonoin'izy ireo ny reniny. Tahaka ny biby no nandraisany azy: tahaka ny hoe alika, saingy ankizivavy izy. Tsy nitsahatra mihodina ato an-tsaiko ireto eritreritra ireto: Nampijaliana izy ireo, saingy nahoana no novoina izy ireo? Azon'izy ireo ampidirina am-ponja fotsiny. Fantatro fa tapa-kevitra ny hamono azy ireo ry zareo, saingy nahoana no ariana ireo vatana mangatsiaka? Tsy mba nanana fianakaviana mitaky ny vatana mangatsiaka ve izy ireo? Ny fanjavonan'azy ireo no asa farany maharikoriko indrindra atao amin'ny olombelona.
Nilaza tamiko ny raiko fa raha miverina ny demokrasia, hitondra milina izy ireo mba hanalàna ireo sisa tavela. Totototoiny izy ireo ary atsipiny, tsy fantatro hoe aiza. “Tsy hahita na inona na inona mandrakizay ry zareo”, hoy ny raiko. Saingy mazava ho azy, mbola misy zavatra tavela foana.
‘Hitako ny namonoanao olona!’
Ho fanazavana fotsiny, tsy misy olana amin'ny tafika mitam-piadiana aho. Raha ny marina, mpikambana tao amin'ny zandarimaria aho. Ny zavatra nataoko dia milaza ny marina momba ireo mpamono olona miisa 20, anisan'izany ny raiko.
Nivelatra ny fitoriana ny raiko raha niresaka taminy tamin'izy nigadra tamin'ny trano ambenana aho. Nomeko tsiny izy noho izy nampiaina ahy ireo habibiana ireo. Nisy fotoana izy niteny hoe: “Tsy fantatro, tsy namono na iza na iza aho”.
Nahatsiaro rikoriko tato anatiko aho, nanontany tena aho hoe inona no dikan'ireo fitiavan-tanindrazana tafahoatra sy ny “fihetseham-po Tandrefana sy Kristianina” lazain'izy ireo fa arovana.
Nitabataba aho avy eo hoe:
Nahoana no sahy milaza izany amiko ianao? Nahita anao namono olona aho! Nahavita heloka goavana ianao, nasainao nandray anjara tamin'ireo heloka bevava ireo aho tamin'ny mbola zaza.
Ary hoy izy, “Hay, mandehana torio aho.”
Ary nataoko izany. Napetrako ny fitoriana voalohany tamin'ny taona 2010. Nahita aho nony farany fa mpamono olona izy.
Tsy misy olona afaka milaza ahy fa diso aho, nijoro vavolombelona manohitra ny raiko niteraka ahy aho.
Namoy ny ainy tamin'ny Mey 2015 i Luis Alberto Quijano, raha mbola tao amin'ny trano ambenana talohan'ny fiafaran'ny raharaham-pitsarana.
Voampanga tamin'ny fandikàn-dalàna 416 izy: fiampangana 158 noho ny tsy fanomezana fanafahana tamin'ny fomba henjana tsy ara-dalàna, asa fampijaliana 154, vono olona goavana 98, asa fampijaliana niteraka fahafatesana 5 ary fakàna an-keriny ankizy latsaky ny 10 taona.
Sary: Luis Alberto Quijano. Sary tahiry
Ny didim-pitsarana “megacausa”
Ny teny “megacausa” amin'ny Espaniola dia milaza ny hagoavan'ny raharaham-pitsarana. Taorian'ny 4 taona nanaovana famotorana, anisan'izany ireo mpijoro vavolombelona miisa 581, nifarana tamin'ny Aogositra ihany ny fitsarana goavana ara-tantaran'ny La Perla-Ribera noho ireo heloka bevava natao tamin'ireo lasibatra miisa 716 teo anelanelan'ny Martsa 1975 ka hatramn'ny Desambra 1978.
Olona 43 no voaheloka noho ny heloka bevava natao tamin'ny olombelona, ary nanome sazy fanamelohana ho faty miisa 28, sazy an-tranomaizina miisa 9 manomboka 2 hatramin'ny 14 taona ny fitsarana, ary olona 6 no afaka madiodio. Tamin'ireo olona 54 voampanga tany am-boalohany, 11 no maty nandritra ny fotoam-pitsarana.
DidimpitsaranaLaPerla: vono olona, fampijaliana, fanolanana nataon'ny manampahefam-panjakana. #fampihorohoroampanjakana
Mpikambana ao amin'ny tafika nandritra ny didy jadona avokoa izy rehetra, anisan'izany ireo miaramila taloha, polisy taloha sy mpiasa sivily sasany.
Nentina tao La Perla i Piero de Monti, nalaina an-keriny miaraka amin'ny vadiny bevohoka tamin'ny Jiona 1976. Niresaka tamin'ny efitra mangina izy :
Orinasan'ny faty ny La Perla, natsangan'ny fisainana feno habibiana.
Dingana manan-tantara ho an'ny fikambanan'ny zon'olombelona izay niasa nandritra ny taona maro mba hahazoan'ireo niharam-boina ny rariny ny didim-pitsarana. Nilaza i Claudio Orosz, mpisolovava ao amin'ny H.I.J.O.S., fikambanana Arzantina naorina tamin'ny 1995 izay misolotena ny zanak'ireo olona novoina na nanjavona nandritra ny didy jadona hoe:
Naharitra 3 taona mahery ny fitsarana, saingy 39 taona ny fitadiavana.
Tamin'ny Marsa 2007, nitodika tany amin'ny toerana misy ny La Perla ny fanjakana mba hametraka toeram-pahatsiarovana, izay tantanin'ny fikambanan'ny zon'Olombelona ankehitriny.
Ny sasany amin'ireo loharanom-baovao sy sary ao anatin'ity tafatafa ity dia avy amin'ny tahiry sy antontan-taratasy hita tao amin'ny CADHU – Vaomieran'ny Zon'Olombelona ao Arzantina (PDF), tatitry ny Megacausa “La Perla” (PDF) an'ny Vaomieram-pahatsiarovan'ny Faritany, El Diario del Juicio tao amin'ny H.I.J.O.S. Córdoba sy ny tatitra farany avy amin'ny Cosecha Roja, La Perla: el megajuicio del horror llega a su fin avy amin'i Agostina Parisi.